आम जनता किन चाहन्छन् कुलमान ? – bampijhyala.com
Home > समाचार > आम जनता किन चाहन्छन् कुलमान ?
आम जनता किन चाहन्छन् कुलमान ?
१० भाद्र २०७७, बुधबार २२:३८ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाडौं । आम जनता कुलमान घिसिङप्रति कति आशक्त छन् भन्ने उदाहरण एकाएक दोस्रो कार्यकालमा सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रसंगलाई लिएर भाइरल भएको बधाईबाट पुष्टि हुन्छ । मंगलबार एकाएक सामाजिक सञ्जालमा कुलमान घिसिङलाई बधाईको ओइरो आयो तर कुलमानको पुनर्नियूक्तिको प्रसंगनै झुट थियो ।
उपत्यकामा ३०१ जना सहित थप ८८५ मा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि, कुल ३४ हजार ४ शय १८
नेपालय बारेकु कार्ल माक्सन हाति हकु ?
चिसापानी बजार र कर्णाली पुल आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ १० भाद्र २०७७, बुधबार २२:३८
माधवमणि मणि नै हुन् १० भाद्र २०७७, बुधबार २२:३८
‘हेर्देउ न मायाले’ भन्दै रजनीको पछि लागे विल्सन १० भाद्र २०७७, बुधबार २२:३८
वैशाख ११ गते धरहरा टावरको उद्घाटन १० भाद्र २०७७, बुधबार २२:३८
नयाँ वर्षको अवसर संगै दार्चुलामा सिस्नु लगाउँर्दै बिसु पर्व धुमधामसँग मनाइँदै १० भाद्र २०७७, बुधबार २२:३८